ခွဲခွါခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ ! - Myanmar Network
ခွဲခွါခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ !
Posted by Soe Hein on January 11, 2010 at 13:56 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Parting Shot - ခွဲခွါခြင်းနဲ့အတူ ပစ်ခတ်မှုလို့ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူနှစ်ဦးစကားများကြပြီးနောက် နေရာမှမထွက်ခွါခင် တဖက်လူ နာအောင် ထိအောင် (မြန်မာစကားမှာ ပိဿလေးနဲ့ ပစ်လိုက်တဲ့ သဘော) ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ စကားဆင်းသက်လာတာကတော့ ၁၈၀၀ ခုနှစ်များက ပါသီရန် ခေါ် ရှေ့အီရန်လူမျိုးများမှ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပါသီရန်လူမျိုးတွေဟာ မြားပစ် တော်တဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြင်းစီးပြီး မြားပစ် စစ်တိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရှုံးလို့ ဆုတ်ခွါတဲ့အခါမှာလည်း မြင်းကို တလကြမ်းစီးပြီး မြင်းပေါ်ကနေ ရန်သူကို မြားနဲ့ပစ်လိုက်တာကို parthian shot အခေါ်အဝေါ် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ခေတ်ကာလရွှေ့ လျားလာတဲ့အခါ parting shot လို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆုတ်မှာ မြားနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့သလို အီဒီယံအသုံးမှာ စကားလုံးနဲ့ တဖက်လူ အသဲနာအောင် ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းနောက်ခံအရတော့ အမေရိကန်သမ္မတတွေ အနေနဲ့ ရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်မှာ နိုင်ငံကို ရုပ်သံလွှင့်မှတဆင့် နောက်ဆုံးပြောကြားလေ့ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံကကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ သူတို့နွေးထွေးစွာပဲ နူတ်ဆက်လေ့ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံက သူတို့ကိုမကြိုက်လို့ ဝေဖန်လို့ နူတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ ရန်တွေတဲ့သမိုင်းတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။
"For Presidents, their final speeches to the nation are parting thoughts and not parting shots."
"သမ္မတတွေအတွက်တော့ သူတို့နောက်ဆုံးပိတ် ပြောကြားတဲ့မိန်းခွန်းတွေဟာ ခွဲခွါချိန်မှာ သူတို့ဘယ်လို အတွေးတွေ ရှိကြသလဲဆိုတာကိုပဲ ပြောကြတယ်၊ နောက်ဆုံးအထွက် ရန်တွေတဲ့စကား မပြောကြဘူး။"
မကြာခင် သမ္မတရာထူးကုန်ဆုံးတော့မယ့် သမ္မတဂျော့ခ်ျဘုရှ် က သူအနေနဲ့ ရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်မှာ သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် နဲ့အတူ တက္ကစက်ပြည်နယ်မှာ အိမ်ဝယ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးပြန်နေမယ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သူ့စကားထဲမှာ သုံးခဲ့တဲ့ အီဒီယံစကားကတော့ Footloose - ဒီအသုံးအနှုန်းဆင်းသက်လာတာကတော့ ရွက်လှေ က ဖြစ်ပါတယ်။ ရွက်တိုင်အောက်ပိုင်း foot လို့ခေါ်ပြီး ရွက်လွှင့်ရာမှာ ရွက်ရဲ့ ကြိုးကိုတိုင်းနဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာပဲ ချည်းထားပြီး အောက်ပိုင်းမှာ လွတ်ထားတာကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အထက် နဲ့ အောက်ပိုင်း နှစ်ဖက်စလုံးမချည်းထားပဲ အပေါ်ပိုင်းသာ ချည်းထားရင် ရွက်ဟာ လေတိုက်ရင်တိုက်သလို ရွက်ဟာ လွှင့်ချင်သလိုလွှင့်နေသလို အီဒီယံအသုံးမှာလည်း အနှောင်ကြိုးမဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ်လုပ်ချင်ရာလုပ်နိုင်တဲ့ သဘောကို footloose လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
"Mr. Bush said inaTV interview that he plans to be fairly footloose forawhile."
"မစ္စတာဘုရှ် က သူအနေနဲ့ အချိန်အတော်ကြာကြာအထိတော့ တာဝန်ကင်းကင်း နဲ့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နေဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ရုပ်သံလွှင့် အင်တာဗျူးတခုမှာ ပြောသွားခဲ့တယ်။"
The Last Hurrah - နောက်ဆုံးသြဘာ လို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတာကတော့ ၁၉၅၆ ခုနှစ်က အမေရိကန် စာရေးဆရာကြီး Edwin O'Connor ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ် The Last Hurrah မှ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့  စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကတော့ အသက်ကြီးလို့ အနားယူတော့မယ်ဆိုပြီး ခဏခဏပြောပြီး ပြန်ပြန်ပြီး အရွေးခံခဲ့တဲ့ အမည်မဖော်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ မြို့ တမြို့ မှ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မြို့ တော်ဝန်တယောက်အကြောင်းကို ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ပြန်မရွေးခံရတဲ့အခါမှာတော့ သူ့အတွက် the last hurrah အခြေအနေလို့ ရည်ညွှန်းသုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ဒီအသုံးအနှုန်းဟာ ခေတ်စားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦး အနားမယူခင် သူကိုနူတ်ဆက်တာ ဒါမှမဟုတ် နောက်ဆုံးအကြိမ် မအောင်မြင်လိုက်တဲ့ ကြိုးပမ်းမှုလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
"This final term is the last hurrah for Mr. Bush. This is his second term and U.S. President can only serve two terms."
"ဒီနောက်ဆုံးသက်တမ်းဟာ မစ္စတာဘုရ်ှအတွက် အနားယူရမယ့် သက်တမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့  သမ္မတသက်တမ်း ဒုတိယသက်တမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတတဦးအနေနဲ့လည်း သက်တမ်းနှစ်ဆက်ပဲ ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိပါတယ်"
Permalink Reply by 2fcyc0pwpdnw7 on January 6, 2012 at 11:21
Permalink Reply by zaw phyo naing on January 6, 2012 at 11:44
Permalink Reply by 1pjdrht76g6hr on September 27, 2012 at 11:17
အခုလို ဗဟု သုတ တိုးပွားအောင် ရေးပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Permalink Reply by khaing khaing soe on September 27, 2012 at 17:18
Permalink Reply by thant zin tun on October 9, 2012 at 3:25
Permalink Reply by missesit on June 4, 2013 at 11:53
so so thanks.
Permalink Reply by AshinDamahar Nanda on June 15, 2015 at 21:15
i like idioms work.